Qorshaha Waxqabad ee Gabdhaha Qurba Joogta ah ee Gabalka Qoraxeey – Rasaasa News
May 13, 2011 Qorshaha Waxqabad ee Gabdhaha Qurba Joogta ah ee Gabalka Qoraxeey
Gabdhaha qurbajoogta ah ee gabalka Qorxeey ayaa bilaabay qorshe balaadhan oo ay isugu gaynayaan gacmahooda sidii ay wax uuna uga qabanlahaayeen dadka ay abaartu dhaafisay aduunyadoodii gabalka Qoraxeey, waxaase qorshaha gabdhaha qalindaar badan ku haya Jwxo-shiil iyo kooxdiisa oo qaaraan baryahan laga quusiyey.
Gabdhaha gabalka Qoraxeey ayaa lagu yaqaan karti iyo hawl karnimo, oo waligoodba ahaa lafdhabrta dhaqaajisa hawlaha laga qabanayo dhulka Somalida Ogadeeniya.
Gabdhuhu waxay baryahan ku hawlanaayeen sidii ay gacmahooda isugu gayn lahaayeen, una gacan qaban lahaayeen dadka gooman ee dhulka Somalida Ogadeeniya gaar ahaana gabalka Qoraxeey, ee ay abaartu dhaafisay bar iyo beer waxay lahaayeen.
Gabdhaha ayaa arintaasi gacan-qabadka ka bilaabay dalal dhawra, waxaana filayaa in ay wax ka qaban doonaan abaaraha ka jira gabalka Qoraxeey.
Hadab, warar aanu ka helay dalka Ingriiska, ayaa sheegaya in ay jiraan dad doonaya in ay jilaafeeyaan dadaalka waxqabad ee ay wadaan gabdhaha reer Qoraxeey. Dad u dhashay gabalka, oo Abtinimo ku taageera Jwxo-shiil, oo ka xun waxqabadka wanaagsan ee gabdhaha, ee lagu taakulaynayo gabalka Qoraxeey, ayaa waxay faafinayaan war ah in lacagta loo uruurinayo Jwxo-shiil.
Dad badan ayaa kolkii ay maqleen in Jwxo-shiil, lacagta loo uruurinayo diiday in ay bixiyaan, lagana dhaadhicin waaweyey. Arintaas oo kolkii daba gal lagu sameeyey la ogaadey in ay tahay dacaayad aan waxba ka jirin, oo ayna Jwxo-shiil iyo kooxdiisu shaqo ku lahayn, dadka hawsha wadaana ay yihiin dad ayidsan nabada iyo wanaaga degaanka Somalida Itobiya.
Waxaa isweydiin leh kooxda Jwxo-shiil, iyadu ma waxay ka shaqaysa oo kaliya iska horkeenka dadweynaha iyo la dagaalanka nolosha gabalka Qoraxeey?
Waxaa la sheegay in farta lagu fiiqay qaar ka mid ah gabdhaha ka shaqaynaya hawlaha caawinta, iyaga oo lagu sheegay in ay wali la shaqeeyaan kooxda Jwxo-shiil, arintaas oo ayna waxba ka jirin, sababta oo ah gabdhahaas waxaa la kulmay M/weynaha DDSI, kolkii uu London booqday.
Labadii sano ee ugu dambeeyay ayaa waxaa soo badanayey in dadka taageersan kooxda Jwxo-shiil, laga takooro dadka, iyaga oo loo arkayey in ay yihiin dad dhaga la,a oo u afduuban dambiile Jwxo-shiil iyo ganacsiga ka dhaxeeya isaga iyo Eritrea.
Gabdhaha reer Qoraxeey ayaa ahaa hormuudka ururukii ONLF, hase ahaatee, ka dib kolkii ay arkeen in ururku noqday mid uu ku danaysto Jwxo-shiil, oo ka leexday wixii loo abuuray ayey goosteen in nabad wax lagu raadiyo.
Waxayna maanta wadaan hawlo horumarineed oo wax loogu qabanayo dadweynaha gabalka, gaar ahaana gabalka Qoraxeey. Cidii isku dayda in ay ka hor istaagto wanaaga ay wadaana waxay noqon doontaa mid fashilanta sida kuwa maanta.
rasaasa.com, waxay xaqiijisay in hawlaha kaalmada ah ee ay wadaan gabdhaha gabalka Qoraxeey uusan shaqo ku lahayn Jwxo-shiil iyo wax taageersan midna. Lacagahaas la uruurinayana waxaa loogu talo galay in wax laggagaqabto Abaarta ka jirta gabalka Qoraxeey.